Koonfur Africa oo u murugoonaysa Mandela - BBC News Somali
Koonfur Africa oo u murugoonaysa Mandela
Dadwaynaha dalka Koonfur Africa ayaa isugu soo baxay magaalooyinka Johannesburg iyo Soweto si ay ugu murugoodaan hogaamiyahoodii hore, Nelson Mandela oo maalintii Khamiista dhintay isagoo 95 sano jira.
Dad isugu soo baxay guriga Mandela ee Soweto hortiisa, ayaa ku xusuusanayay hogaamiyaha geeriyooday cayaaro qoob ka cayaar iyo heeso.
Waxaa loo dhigayaa aas qaran oo dhacay 15-ka December, sida uu ku dhawaaqay madaxwaynaha Koonfur Africa, Jacob Zuma.
Shir jaraa'id oo uu maanta qabtay, ayaa Mr Zuma uu ku qeexay todobaad loo baroordiiqayo madaxwaynaha hore.
Axadda waxay noqonaysaa maalinta sida dhabta ah loogu ducaynayo, oo ducooyin diimeed loo qaban mdoono.
Tallaadada, tacsi qaran ayaa lagu qaban doono garoonka 95-ta kun ee qof qaada ee daafaha Johannesburg ku yaalla.
Arbacada laga bilaabo waxaa maydkiisa oolayaa caasimadda Pretoria ilaa maalinta Jimcaha.
Aasku wuxuu ka dhacayaa tuulada Qunu ee bariga magaalada Cape Town halkaas oo Mr Mandela uu ku soo koray.
Duqa magaaladaas Patricia de Lille,, ayaa ku dhawaaqay xaflad diimuhu u dhan yihiin in lagu qabanayo magaalada inta u dhaxaysa 5-ta galabnimo ilaa 7-ta fiidnimo xilliga Koonfur Africa maalinta Jimcaha.
Isagoo ka hadlayay magaalada Cape Town, Wadaadka Masiixiga Emeritus Desmond Tutu, ayaa ku tilmaamay nin baray dadka Koonfur Africa casharo tusaale cad ah oo la xiriira iscafinta, naxariista iyo dib u heshiisiinta.
Wuxuu kaloo tilmaamay ciladaha u lahaa Mr Mandela oo uu yiri 'wuxuu si xad dhaaf ah daacad ugu ahaa ururkiisa iyo qaar ka mid ah saaxiibadii oo dhamaadkii sidii uu rabay noqon waayay.
Image caption Qariidadda goobta lagu aasayo Mandela